आवाज नेपाल, December 5, 2018
निरु गौतम रुपन्देही । यस वर्ष कात्तिकको मध्यसम्म करीब १६ लाख स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले लुम्बिनी भ्रमण गरिसके । भ्रमणका लागि उपयुक्त याम भएकाले यस वर्ष थप एक लाख पर्यटक लुम्बिनी घुम्न आउने अपेक्षा लुम्बिनी विकास कोषले राखेको छ । तथ्याङ्कअनुसार यहाँ आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै श्रीलङ्काका छन् । त्यसपछि थाइल्यान्ड, चीन, बर्मा, म्यानमारलगायतका देशहरुबाट […]
आवाज नेपाल, November 28, 2018
श्रमप्रतिको सम्मान बढाउने यो कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्दै वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता घटाउन भूमिका खेल्नेछ आमनेपालीको जीवनमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने सामाजिक सुरक्षा योजना ऐतिहासिक रूपमा शुभारम्भ भएको छ । सामाजिक सुरक्षा सुरुवातको ऐतिहासिक घडीबाट नेपाल एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । हामीले विगतको अनिश्चितता र असुरक्षित अवस्थाको अन्त्य गर्दै सुरक्षित र सुनिश्चित नयाँ यात्रा सुरु गरेका […]
स्वास्नी हराएको सूचना : कथा
आवाज नेपाल, July 21, 2018
उज्जन पौडेल ठुस्स गनाएको काखी सुँघेर एक स्वाटमा जाँडको बटुको रित्याएपछि काइँलो बाहिरिन्छ । उसको खातामा निक्कै हिसाब बाँकी छ । सधैँ एक दुई बटुका जाँड रित्याएर खातामा पैसा चढाई ऊ त्यसैगरी बाहिरिने गर्छ । “यो मोराले कहिल्यै पैसा तिर्ने भएन”, होटेल साहुनी आजित भएर बेलाबेला ठूल्ठूलो स्वरले हपार्ने गर्थी ताकि ऊ लाजले पैसा तिरोस् […]
महिला–पुरुषहिंसा अन्त्य गरौं, एकै रथका दुई पांग्रा बनौं
आवाज नेपाल, June 30, 2018
नुवाकोटका सुमन खत्रीले ३५ बर्षको हुदाँ १७ बर्षकी युवतीसँग विवाह गरे । आफ्नै फुपूले खोजिदिएकी ललितपुरको केटी । भर्खर प्लस टु सकेकी छोरी अझै अगाडि पढोेस् र आफ्नै खुट्टामा उभियोस् भन्ने अभिलाषा बाबु–आमाको नभएकै त होला, केटा जापान बसेको भनेपछि बिहे गरियो । न उमेरले फरक पार्यो, न शिक्षाको नै अभाव खड्क्यो । अन्ततः परिवारकै […]
“प्रचण्डसँग तपाईँको जीवन बिताउने साहसलाई सलाम छ सीता आमा” एउटा फेसबुक स्टाटस जसले धेरैको मन छोयो
आवाज नेपाल, June 28, 2018
काठमाण्डौ । बुधबार दिउँसो देखि एउटा फेुसबुक स्टाटस लगातार सेयर भै रहेको छ । र यत्रत्यत्र फेसबुकको भित्ता भरि यहि स्टाटस छरियका छन् । स्टाटस नेकपामा अध्यक्ष प्रचण्डकी श्रीमती सीताको नाममा लेखिएको छ । स्टाटसमा लेखिएको छ । सीता आमा, तपाईँ पनि सारै अभागी। क्यान्सरले छोरीलाई लग्यो, नियतिले हट्टाकट्टा पुत्र खोस्यो ।जवान छोराछोरी गुमाउँदाको पीडा […]
आवाज नेपाल, June 27, 2018
–विक्रम सुद नयाँ दिल्ली, भारत, । पाकिस्तानमा आगामी महिना निर्वाचन हुँदैछ । र सन् २०१७ पछिको घटनाक्रमलाई हेर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफको उत्तराधिकारीका लागि कुनै प्रष्ट लाइन देखिएको छैन । कतिपयले निर्वाचनको समय बाहिरिनेले शरीफलाई कुनै क्षति पु¥याउने छैन भनिएता पनि त्यहाँको राजनीतिमा सहयोग फिर्ता लिने र पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसले पाकिस्तानी […]
नेपालमा नै ८० वर्षे विद्यार्थी, जसको लोभ लाग्दो दैनिकी
जनकपुर । बिहान पाँच बजे उठेर नित्यकार्य सम्पन्न गरी कक्षा कोठाहरू सफा गर्छन् । त्यसपछि नुहाईधुवाई, पूजापाठ गरी काँधमा झोला बोकी कलेजका लागि हिँड्छन् । ६ः३० बजे उनी कलेज पुगिसक्छन् । ७ बजेदेखि कलेजमा पढाइ सुरु हुन्छ । चार विषय पढ्छन् उनी त्यहाँ । ९ः३० बजे कलेजबाट निस्केर आफ्नो स्कुल फर्कन्छन् उनी । उनी खाना […]
फुटबल ‘खेलाडीसँग सेक्स’ अफरका लागी बर्गर किंगले माग्यो माफि
आवाज नेपाल, June 22, 2018
मस्को । रसियाको फास्ट फुड कम्पनी बर्गर किंगले आफ्नो विवादित विज्ञापनका लागि माफी माग्नुपरेको छ । उक्त विज्ञापनमा रसियाली महिलालाई विश्व कपमा खेलिरहेका खेलाडीमार्फत गर्भवती भए ४७ हजार डलर जित्ने अवसर र आजिवन वूपर्स बर्गरको अफर दिइएको थियो । यसको घोषणा रसियामा सोसल मिडिया वेबसाइट ‘विके’ मार्फत जून १९ तारिखमा गरिएको थियो । यो सोसल […]
गृहमन्त्रीलाई पूर्व जनमुक्तीसेनाको खुलापत्रः बलिदानबाट जन्मेको सत्तालाई बालुवाटार लगेर गाड्ने कि बालुवाटारलाई जनसत्तामा रुपान्तरण गर्ने ?
आवाज नेपाल, June 11, 2018
सम्मानिय गृहमन्त्रीज्यू, नमस्ते अभिवादन ! यतिबेला तपाईंको चर्चा र परिचर्चा चलिरहेको सत्य हो । तपाईंहरुले क्रान्तिको झन्डा उठाउने बेला लाखौं मजदुर र सर्बहारा बर्गले न्याय मुक्ति र अधिकारको लडाइमा साथ दिएको पनि सत्य नै हो । यो संसदीय वयवस्था विरुद्ध अनेक दस्तावेज तयार पार्ने नेतृत्व मध्यमा तपाईं पनि एक हो । आज तपाईंको चर्चा दुई […]